Ukutshixa umnyango kwiWet engqongileyo
ngu admin nge-20-07-02
Ngenxa yemvula eqhubekayo, umswakama womoya uya kuba phezulu kakhulu, kwaye onke amagumbi endlu anokuba manzi kakhulu. Ngeli xesha, kuya kuchaphazela ixesha lokutshixa umnyango. Ngenxa yokuba umgangatho webhokisi yokutshixa ulungile okanye ungalunganga, enye yeendlela zokuvavanywa lixesha lokuvavanywa kwetyiwa. Kuba ...
Indlela yokucoca kunye nokubulala intsholongwane ngexesha lobhubhane
Ubhubhani wenoveli coronavirus ubukhali kakhulu.Ngoko ke, nokuba kusekhaya okanye ngaphandle, ukubekela ecaleni ukusasazeka kwale ntsholongwane, eli lelona nyathelo libaluleke kakhulu.Ngokuqinisekisa ukuba ikhaya, impilo .Ngoku, ndiza kukufundisa indlela yokucoca ...
Ungayigcina njani isitshixo somnyango
Isitshixo somnyango yeyona nto ehlala ihleli kubomi bethu bemihla ngemihla. Uninzi lwabantu lucinga ukuba, ukuba uthenge itshixa ekhaya, awudingi ukuyigcina ide yaphuke. Ubomi benkonzo yokutshixa umnyango bunokonyuswa kakhulu ngokwenza ulondolozo kwiinkalo ezininzi. Umzimba weLock: njengembindi ...
Ifanitshala yezixhobo zeHardware, Ibrass Door Knobs, Izixhobo zefanitshala kunye neeNqaku, IBroth Door Knobs, Ibhloko ye-Brass Lever Door, I-Knobs Door Knobs eqinileyo,